Otu esi etinye ma ọ bụ kwalite Nvidia ọkwọ ụgbọ ala na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Otu esi etinye ma ọ bụ kwalite Nvidia ọkwọ ụgbọ ala na Debian 11 Bullseye
November 9, 2021 October 3, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ - Wụnye Nvidia Beta / Ndị ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ
Wụnye Nvidia Legacy Drivers
Nhọrọ. Wụnye Nvidia Drivers Iji aka
Ọtụtụ sistemụ desktọpụ Linux ọgbara ọhụrụ dịka Debian bia na a Nvidia ọkwọ ụgbọala etinyegoro na mbụ Ọhụrụ Onye na-anya ngwaọrụ eserese mepere emepe maka kaadị vidiyo Nvidia. Maka ọtụtụ akụkụ, nke a bụ ihe a na-anabata; Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eji sistemụ Linux gị maka imepụta eserese ma ọ bụ egwuregwu, ị nwere ike nweta ndị ọkwọ ụgbọ ala ka mma.
N'ime nkuzi na-esonụ, ị ga-amụta ka esi etinye Nvidia Graphic Drivers maka usoro 470.xx / 465.xx / 460.xx / 390.xx na 340.xx site na Nvidia Proprietary Repository, na-enye gị ihe kachasị ọhụrụ na ngwanrọ dị.
Nkuzi dị n'okpuru na-elekwasị anya na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia kwụsiri ike, gaa na nkuzi anyị na ịwụnye beta ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ na Debian 11 bullseye site na. na ịpị ebe a.
Site na ndabara, ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia anaghị eso Debian 11 Bullseye. Agbanyeghị, enwere ike nweta nke a site n'ịgbanwe "/etc/apt/sources.list" na-agbakwụnye "nye aka" na "anaghị efu" ruo na njedebe nke ahịrị "deb http://deb.debian.org/debian/ sid main na-enye aka na-abụghị n'efu".
Nke mbụ, jiri ndezi ederede mepee faịlụ Source.list:
Ọzọ, chọta ahịrị:
Wee gbanwee gaa na ndị a, ma ọ bụ tinye akụkụ ndị ọzọ n'onwe gị:
Ozugbo agbakwunyere, melite ndepụta nchekwa gị.
Tupu ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala Nvidia ọ bụla, ị ga-achọ ịwụnye nkụnye eji isi mee kernel kwesịrị ekwesị maka onye ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA iji wuo ya. Ị nwere ike iwunye ma ọ bụ 64bit ma ọ bụ 32bit, ma ị nwere ike chọpụta nke a site na iji iwu lscpu:
Site na mmepụta, sistemụ ahụ bụ 64bit, yabụ ịkwesịrị ịwụnye nkụnye ndị a:
Ọ bụrụ na ị nwere sistemụ 32bit, jiri iwu a kama:
32-bit na-abụghị PAE kernel:
kernel PAE 32-bit:
Na-esote, ị nwere ike ịwụnye ngwugwu "Nvidia-chọpụta," nke ga-atụ aro ngwugwu kacha mma maka kaadị eserese gị ozugbo. Iji mee nke a, jiri iwu a:
Ugbu a na etinyere Nvidia-detect, gbaa iwu ka ịlele kaadị eserese Nvidia ugbu a:
Ihe mmepụta egosila igwe dị na ihe atụ nwere kaadị GeForce GTX 1650 nakwa na a na-atụ aro ka ịwụnye ya nvidia-ọkwọ ụgbọala ngwugwu. Nyere GeForce GTX 1650 bụ kaadị ochie, ngwugwu ndabara Nvidia bụ nzọ kacha mma maka nkwụsi ike na nchekwa. Ọ bụrụ na ị nwere kaadị Edge na-agba ọbara, a ga-ekpuchi nke a n'ihu na nkuzi.
Na-esote, wụnye ngwugwu akwadoro:
Mmepụta ihe atụ nwere ntụkwasị obi niile a ga-etinye:
N'oge echichi, ị ga-ahụ ngwa ngwa dị ka ndị a:
Nke a bụ n'ihi onye ọkwọ ụgbọ ala Nouveau n'efu na-emegide na arụnyere ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ ahụ. Dị ka ozi ahụ si dị, ị ga-achọ ịmalitegharị iji dozie nke a; maka ugbu a, pịa "Tinye igodo" aga n'ihu.
Ozugbo arụnyere, reboot gị usoro.
Ozugbo abanyeghachitere, gbanye ya "Nvidia-smi" iwu iji gosi na etinyela ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia ọhụrụ.
Dịka nsonaazụ gosiri, arụnyere ụdị ọkwọ ụgbọ ala 460.91.03 nke ọma.
Ọ bụrụ na kaadị Nvidia Graphics gị emeela agadi site na 400 Series gbadaa, ị ga-achọ ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala. Usoro a bụ otu ihe ahụ, naanị iji iwu wụnye ọhụrụ:
Ozugbo emechara, echefula ịmalitegharị sistemụ gị.
Ọzọ, na-agba ọsọ "Nvidia-smi" nye iwu ka inyocha nrụnye.
The 340 usoro enwere ike itinye ya na teknụzụ; Otú ọ dị, akwadoghị ya, yana ọtụtụ ntụpọ nchekwa dị na ndị ọkwọ ụgbọala ahụ. A naghị atụ aro ka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala a ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji dochie 390xx na 340xx. mana dọọ aka na ntị na Debian anaghị akwado nke a.
Ka e were ya na ịchọrọ ngwugwu Nvidia ọhụrụ n'ihi na kaadị eserese gị bụ modul ọhụrụ nke anaghị akwado na ebe nchekwa ndabere nke Nvidia na Debian 11 Bullseye. Iji wụnye ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ na nke kachasị ọhụrụ, ị ga-achọ ibudata faịlụ .run na ibe nbudata Nvidia wee tinye aka na ya. Usoro a gụnyere karịa, mana iji aka gị wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala pụtara ịhọrọ ụdị nke ịchọrọ itinye ka ọ baara gị uru.
Nke mbụ, gaa na Nvidia nbudata ibe ma budata kachasị ọhụrụ .run faịlụ ma ọ bụ nweta njikọ ma jiri ya wget iwu.
Ọmụmaatụ naanị (gbaa mbọ nweta njikọ kacha ọhụrụ):
Wụnye isi ndị isi Linux na ndabere mkpokọta:
Na-esote, onye ọkwọ ụgbọ ala nouveau na-emepụta faịlụ blacklist:
Ozugbo ịbanye na faịlụ ahụ, tinye ihe ndị a:
Chekwaa faịlụ CTRL+O, wee pụọ CTRL + X. Mgbe ahụ ị ga-achọ ịmalitegharị ihe ahụ kernel initramfs:
Ugbu a, malitegharịa na ọkwa ọsọ ọtụtụ onye ọrụ. Nke a ga-ewepụ onye ọrụ GUI ka ọ malitegharịrị:
Nbanye na akaụntụ gị; ọ ga-abụ ihuenyo naanị ọnụ. Gaa na ndekọ ma ọ bụrụ na achọrọ ya ebe ibudatara faịlụ .run kwa. Na-esote, gbaa iwu bash a ka ịmalite usoro nrụnye.
Ọmụmaatụ naanị (ụdị gị ga-adị iche na emelitere ọzọ n'ọdịnihu):
Ọ bụrụ na edobere ihe niile nke ọma, ị ga-ahụ ihuenyo na ebe a na-ebunye ihe maka ịrụ kernel. Mgbe nkeji ole na ole gachara, ị ga-ahụ ngwa ngwa mbụ gị.
Nke a na-agwa gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye 32-bit ndakọrịta, họrọ Ee or Mba aga n'ihu.
Na-esote, ị ga-enweta nkwado ọzọ:
A gwara gị ka idobe ntọala ndabara; nhọrọ akwadoro maka nrụnye ọhụrụ ga-abụ Ee.
Ugbu a arụnyere ndị ọkwọ ụgbọ ala, ịkwesịrị ịmalitegharị sistemụ gị mana nke mbụ, jide n'aka na ị gaghachi azụ na UI eserese:
Ugbu a, banye na desktọpụ Debian gị wee mee ya "Nvidia-smi" iwu ka ịhụ ma etinyere ndị ọkwọ ụgbọala kacha ọhụrụ ejiri aka ebudata:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, 470.74 ọkwọ ụgbọala arụnyere nke ọma. Rịba ama, nsụgharị ndị ahụ ga-agbanwe n'ọdịnihu, mana otu ụkpụrụ ahụ ka dị, na-emelite iwu iji kwado aha ụdị Nvidia ọhụrụ.
Ugbu a, ị nwere ike ịmalite gị Nvidia panel na Ọrụ> Gosi Ngwa> NVIDIA X Server.
Na panel, ị nwere ike ịhazigharị ntọala wee hụ ozi ndị ọzọ site na iji Nvidia GUI.
N'ime nkuzi a, ị mụtara ka esi etinye nkwụsi ike ma ọ bụ beta ọkwọ ụgbọala na Debian 11 Bullseye Desktop gị. Mkpebi nke ndị ọkwọ ụgbọala ịwụnye ga-agbadata tumadi na afọ nke kaadị ahụ. Maka kaadị ochie, jiri ebe nchekwa Nvidia ndabara, yana ngwugwu akwadoro kwesịrị ịwụnye. Ọnụ na-agba ọbara ga-abụ ihe aga-aga maka ndị na-egwu egwuregwu nwere kaadị kacha ọhụrụ chọrọ ngwugwu kachasị ọhụrụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe ize ndụ nke enweghị ntụkwasị obi na obere nsogbu nchekwa ga-abawanye site na iji ndị ọkwọ ụgbọ ala na-agba ọbara.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Nvidia Mail igodo
Otu esi etinye onye ahịa mbugharị na Ubuntu 20.04
Echiche 19 na "Otu esi etinye ma ọ bụ kwalite Nvidia ọkwọ ụgbọala na Debian 11 Bullseye"
October 6, 2021 na 1: 19 am
Nke a bụ ụzọ siri ike. M na-aga Nvidia Direct. Nweta onye ọkwọ ụgbọ ala nke nhọrọ / mkpa wee wụnye mgbọrọgwụ ahịrị iwu VIA (ụzọ ochie ụlọ akwụkwọ unix/linux). Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe ọkwọ ụgbọ ala ahaziri debian ma ọ bụ onye ọhụrụ, nke a nwere ike ịbụ ụzọ kacha mma.
October 26, 2021 na 2: 02 am
Kedu ihe ị na-ede na ahịrị iwu iji wụnye ya na faịlụ webụsaịtị nvidia? Ị pụtara faịlụ .run? Nke a ọ bụ ihe m nwere ike ime site na putty? Ma ọ bụ ọ ga-adị m mkpa itinye faịlụ ahụ na thumbdrive? Enweghị m gnome na Debian 11 m.
November 9, 2021 na 5: 56 am
sh nvidia****.run Ma jiri syntactic/na mkpoputa ziri ezi. Emere ya ezi mgbọrọgwụ mode. Nke a bụ ihe isi ike. Dị ka ekwuru na mbụ- hard core unix/linux old school way. Ọ bụrụ na ị mebie, ị ga-ebibi!
November 9, 2021 na 6: 35 am
Ee, ọ nwere ike ịgahie.
Ọzọkwa maka Chris, ikekwe nke a nwere ike inye aka https://www.linuxcapable.com/how-to-install-nvidia-495-xx-beta-drivers-on-debian-11-bullseye/
Naanị nwere foto, ma eleghị anya, foto doro anya ka mma. Nke a bụ maka ndị ọkwọ ụgbọ ala beta, mana ugbu a ị ga-etinye ngalaba njirimara ọhụrụ.
Otú ọ dị, usoro a bụ ihe ị na-amụta n'ezie.
October 15, 2021 na 9: 58 pm
October 16, 2021 na 9: 14 am
Ndo, aghọtaghị m nsogbu ahụ. Anaghị m asụ asụsụ ị na-ede.
November 20, 2021 na 1: 09 am
Ọ sịrị "Ebee ka ndị ọkwọ ụgbọ ala 32-bit nọ?" Echere m.
November 23, 2021 na 10: 26 pm
nke 32 ibe n'ibe, ma ọ bụghị mgbe e mesịrị na-agaghị arụ ọrụ
October 16, 2021 na 12: 39 am
M gbakwunyere ntinye aka na isi mmalite ndị na-enweghị n'efu, wee tinye isi ihe ndị ahụ, mana mgbe m nwara ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala, a na m enweta nke a:
dabara nke ọma install nvidia-driver Ndepụta ngwugwu Ọgụgụ... Emela ya Ịgụ ozi steeti... Emeela ngwugwu nvidia-ọkwọ ụgbọala adịghị, mana ngwugwu ọzọ na-ezo aka ya. Nke a nwere ike ịpụta na ngwugwu ahụ efuola, mebiela ya, ma ọ bụ dị naanị site na isi mmalite ọzọ E: ngwugwu 'nvidia-driver' enweghị onye nrụnye nrụnye.
Ana m enweta otu njehie ahụ mgbe m nwara ịwụnye nvidia-detect.
Debian 11, arụnyere ọhụrụ, dabara adaba na emelitere yana kwalite.
Anwabeghị m ịwụnye ozugbo site na Nvidia, ma. Nke ahụ ga-abụ nzọụkwụ m na-esote, echere m.
Atụmatụ ọ bụla ga-enwe ekele.
October 16, 2021 na 9: 18 am
Kedu kaadị eserese ọ bụ, enwere m ike ịjụ?
Ọ bụrụ na ọ dị nso nso a, iji aka tinye ya na-akakarị mma. Ị nwekwara ike ịdọrọ ya na ebe nchekwa Sid/Unstable; Otú ọ dị, mgbe m kere nkuzi ahụ, ahụrụ m na ọ bụ ụdị 1 n'azụ Nvidia wepụtara ọhụrụ.
Nke abuo, ọ dị nnọọ mfe iji aka wụnye karịa Sid / Unstable ọzọ ebe ọ bụ na e nwere ịdabere na mkpa iji aka budata, na-eme ka ọ dị nnọọ mgbagwoju anya na tricky maka nkezi desktọọpụ ọrụ.
Mee ka m Mara. Enwere m mmasị n'ezie, m ga-emelitekwa nkuzi nkuzi ahụ.
Daalụ maka ozi ahụ. Ọ nyere m afọ ojuju.
October 17, 2021 na 1: 20 am
Enwere m GeForce RTX 3060, mana ọ tụgharịrị bụrụ njehie onye ọrụ. M gbakwunyere enyemaka na enweghị onwe na ahịrị deb-src, kama ahịrị ụgwọ. Ozugbo m doziri na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Daalụ maka nnukwu nkuzi!
October 17, 2021 na 10: 16 am
Dị egwu ịnụ! Daalụ Andrew.
October 26, 2021 na 2: 01 am
Mgbe m pịnyere Nvidia-SMI ọ na-ekwu "NVIDIA-SMI adaala n'ihi na ọ nweghị ike ịkparịta ụka na onye ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA. Jide n'aka na etinyere ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA kachasị ọhụrụ ma na-agba ọsọ" Mgbe m pịnyere: apt install linux-headers-amd64, ọ na-ekwu "linux-header-amd64 adịlarị na ụdị kachasị ọhụrụ (5.10.70-1) na mgbe m pịnyere: dabara nke ọma wụnye nvidia-driver linux-image-amd64, ọ na-ekwu "Nvidia-driver na-agba ọsọ ụdị kachasị ọhụrụ (460.91.03-1). Ma n'ihi ihe ụfọdụ ọ ka na-adịghị na-ekwurịta okwu, biko ị nwere ike nyere aka. Kedu ka m ga-esi gbanwee mkpebi ma ọ bụrụ na etinyeghị m gnome? Nyocha m bụ 3440 × 1440. Daalụ.
October 26, 2021 na 9: 51 am
Daalụ maka ozi ahụ, Chris.
Ogo nleba anya ekwesịghị inwe ihe jikọrọ ya na ya. Nke abuo, nkuzi a na-eji nrụnye ọhụrụ Debian 11 ọkọlọtọ.
Mgbe ụfọdụ ndị njikwa ngosi ọzọ ma ọ bụ gburugburu desktọpụ nwere ike ịkpata nsogbu ebe enwere ọtụtụ nhọrọ m nwalebeghị ha niile ma ewezuga GNOME nke na-abịa na Debian 11.
Nke abuo, ị na-agbalị ịwụnye akwụkwọ ntuziaka .run faịlụ? Ebe ọ bụ na iwu bụ
sudo dabara wụnye linux-headers-$(name -r) build-dị mkpa libglvnd-dev pkg-config
sudo apt wụnye linux-headers-amd64
Mee ka m mara ka ị na-aga. Daalụ
November 23, 2021 na 1: 35 pm
Ndewo m na-alụ ọgụ na nke a abalị niile ọ naghị arụ ọrụ na deb-src yana ntinye akwụkwọ ntuziaka.
Biko tinyekwuo ozi gbasara isiokwu gị. Onye njikwa Boot UEFI sitere na WINDOWS nwere sistemu okpukpu abụọ, na-egbochi ohere kernel Linux na kaadị eserese nvidia. Achọrọ gbanyụọ UEFI. tupu m emee, ana m enweta ozi site na apt-nweta nvidia-driver - Faịlụ efu / usr /…… na-ewe iwe na nghọtahie na nsogbu nke nouveau
November 23, 2021 na 6: 25 pm
Daalụ maka nzaghachi, ga-eburu nke a n'uche na nkuzi, obi ụtọ ịnụ na ị nwetara ya.
November 25, 2021 na 7: 36 am
magburu onwe ndu maka newbie. Daalụ.
November 29, 2021 na 2: 57 am
Nduzi di ezigbo mma. Mana tupu echichi, ekwesịrị m iwepụ ndị ọkwọ ụgbọ ala gara aga:
sudo apt-purge wepụ nvidia.*
November 29, 2021 na 5: 29 am
Daalụ maka ozi ahụ, Alex.
Ọkpụkpọ oku dị mma na iwepu ndị ọkwọ ụgbọ ala gara aga ma ọ bụrụ na etinyere ya. M ga-agbakwunye nhọrọ/ịdọ aka ná ntị a na nrụnye kaadị eserese m na-aga n'ihu. Obi dị m ụtọ na ị haziri ya, nkuzi ahụ nyere aka.